अनमोलको डन पारा - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः पुस १२, २०७४ - साप्ताहिक
अनमोलको डन पारा
‘मस्टअवेटेड’ चलचित्रका रूपमा दर्शकहरूमा ‘कृ’को ट्रेलरलाई लिएर असाध्यै कौतुहलता थियो, जुन गत शुक्रबार सकिएको छ । ‘कृ’को ट्रेलर आयो, दर्शकहरूले युट्युबमा उक्त ट्रेलर यसरी हेरे कि नहेर्दा पछि परिन्छ कि भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो भयो ।
अनमोल केसीको क्रेज व्यापक छ । चलचित्र ‘कृ’को ट्रेलर युट्युबमा रिलिज भएको चौबीस घण्टा पनि नबित्दै पाँच लाखभन्दा बढी भ्युज भयो, जुन नेपाली चलचित्रका लागि सुखद खबर हो । चलचित्रवृत्तमा त ‘कृ’ को ट्रेलरको चर्चा हुनु स्वभाविक थियो, दर्शकहरूले पनि यसको पर्याप्त चर्चा गरे ।
ट्रेलर हेरेपछि दर्शकहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ । शाहरूख खानको चलचित्र ‘डन टु’को सन् २०११ को जुनमा रिलिज भएको टिजरको आरम्भमा शाहरूखले बोलेको सम्बाद ‘मेरे दुश्मन समझ रहें थे कि अब कभी लौट के न आउंगा...’लाई नेपालीमा जस्तातस्तै उल्था गरेर चलचित्र ‘कृ’को ट्रेलरको आरम्भमा अनमोलले भनेका छन्, ‘मेरो दुश्मनहरूले सोचेका होलान् कि म कहिल्यै फर्केर आउँदिन भनेर...’ ।
नयाँ लुक्समा देखिएका अनमोललाई दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन्, तर हिन्दी चलचित्रको संवादलाई उल्था गरेकोमा दर्जनौं नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । अनमोलको यो कपीले माघमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई कत्तिको असर पार्ला ? अब चलचित्र ‘कृ’ मा त्यस्तै अरू कपी सम्बाद तथा दृश्य छन् भने त ? खै के भन्नु र ?
छिमेकमा अनमोलको चर्चा
चुनावी नाराको बिग्रिएको पारा
भुवनलाई अनमोलको भर
फ्लप क्लबमा को–को ? मंसिर २८, २०७५